State Counsellor receives Ambassador of Grand Duchy of Luxembourg – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Ambassador of Grand Duchy of Luxembourg
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of Myanmar, received Mr Jean-Paul Senninger, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Grand Duchy of Luxembourg to Myanmar, with residence in Bangkok at 2:45 pm yesterday at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to the promotion of bilateral relations and cooperation between Myanmar and Luxembourg.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူဇင်ဘတ် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူဇင်ဘတ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jean-Paul Senninger အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၁၄:၄၅နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-လူဇင်ဘတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။